Valentines' Day မှာ ရိုးရိုး ချောကလက်တွေထပ် ပိုပြီးရင်ခုန်ရစေမယ့် Etude House x Kit Kat | CosmeticMyanmar
Home » Article » Valentines’ Day မှာ ရိုးရိုး ချောကလက်တွေထပ် ပိုပြီးရင်ခုန်ရစေမယ့် Etude House x Kit Kat
အခုဆို February ရောက်လာပြီဆိုတော့ ချစ်သူများနေ့လည်း နီးလာပြီလေနော်။ ဒီနှစ်အတွက် Valentines’ Day မှာ ချစ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် မင်မင့်လို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ဖြစ် ချောကလက်ပေးမယ်ဆိုရင် Etude House x Kit Kat Eyeshadow လေးကို ရွေးသင့်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီ Etude House x Kit Kat ရဲ့ item လေးကတော့ eyeshadow palette လေးပဲဖြစ်ပြီး palette တစ်ခုမှာ အရောင် ၆ မျိုးနဲ့ စုစုပေါင်း အရောင် ၁၂မျိုးရှိပါတယ်။ Play Color Eyes #KitKat လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ palette လေးတွေမှာမှ အမျိုးအစား ၂ခုရှိပါသေးတယ်။ #KitKat Original ဆိုတဲ့ မူလလက်ဟောင်း milk chocolare KitKat အနီရောင်ထုပ်လေးပုံစံနဲ့ palette လေးရယ်၊ ပြီးတော့ #KitKat Strawberry Tiramisu ဆိုတဲ့ White strawberry chocolate edition KitKat ပန်းရောင်အထုပ်လေးတွေပုံစံနဲ့ palette ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပါ။ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ရတာနဲ့တင် Etude House ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း packaging လေးနဲ့တင် အရမ်းတွေချစ်ဖို့ကောင်းနေပါပြီနော်။
ဒီ palette တွေမှာပါတဲ့ အရောင်လေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ #KitKat Original မှာပါတဲ့ အရောင်လေးတွေက
1. Nude Color ဆန်တဲ့ Sweet Vanilla Choco
2. အညိုဖျော့ဖျော့ Soft Milk Choco
3. ရွှေရောင်အလက်လေးတွေပါတဲ့ Crispy and Sweet Flavor Brown
4. KitKat အရောင်နဲ့တူတဲ့ Original Choco Brown
5. ရွှေရောင်လက်လက် Biscuit Crumbles နဲ့
6. အနီရောင် You are my Kitkat တို့ပါဝင်ပါတယ်။
#KitKat Strawberry Tiramisu မှာတော့
1. Cream ရောင်ဖျော့ဖျော့ Mascarpone Cheese
2. ပန်းနုရောင်ဖျော့ဖျော့ Strawberry Sugar Powder
3. ပန်းရောင်အရင့် Fresh Strawberry Crush
4. အညိုစစ်စစ် Bittersweet Coffee Flavor
5. ရွှေရောင်အလက်လက်တွေပါတဲ့ Cocoa Sprinkles နဲ့
6. ရွှေညိုရောင် Melting Cocoa Butter ဆိုပြီးအရောင် ၆ ရောင်ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီ palette နှစ်ခုလုံးရဲ့အရောင်လေးတွေက ပွဲသွားပွဲလာရော၊ နေ့တိုင်းအတွက်ပါ အဆင်ပြေတာမို့ ဒီနှစ် Valentines’ Day အတွက်တော့ ချောကလက်အစစ်ပေးမယ့်အစား ဒီ Play Color Eyes #KitKat palette လေးတွေကိုသာပေးလိုက်ပါ၊ ရင်ခုန်သံတွေမြန်သွားစေရမယ်လို့သာ ညွှန်းလိုက်ရပါတယ်။
references : https://www.etudehouse.com
Tags: Etude HouseEyeshadow PaletteKitKatPlay Color Eyes